“NY FANAHY MASINA TONGA AMINTSIKA”.
23 mai 2018 by mpiandraikitra	Leave a Comment
Hoy Jesosy: “Raiso ny Fanahy Masina” Jao.20:22.
Endrika telo no isehoan’ny asan’ny Fanahy Masina eo amin’izay mandray Azy sy manaiky ny asany:
1- Ny voalohany: ny Fibebahana, dia ny fibebahan’ny mpanota.
. Ny hevitra voalohan’ny fibebahana, ary fibebahana marina, dia ny nenina lalina ny amin’ny fahadisoana sy ny fahotana vita tamin’Andriamanitra. Tsy ilay fo nohamafisin’ny ota intsony, izay niodina sy nikomy tamin’Andriamanitra, ary feno fanamarinan-tena, fa ilay fo voatorotoron’ny fitiavan’Andriamanitra mamindra fo sy vonona ny hamela heloka. Izany dia mifanaraka amin’ny vavaka izay nataon’i Davida mpanjaka , izay rehefa avy nanota tamin’i Batseba, dia nivalo teo anatrehan’ny Tompo nanao hoe : « Taminao dia taminao ihany no nanotako, ary izay ratsy eo imasonao no efa nataoko, mba ho marina hianao, raha miteny, ary tsy hanan-tsiny hianao, raha mitsara. Indro, tamin’ny heloka no niterahana ahy, ary tamin’ny fahotana no torontoronina ahy ny reniko. Indro, fahamarinana ao am-po no sitrakao; ary fahendrena ao amin’ny miafina no ampahafantarinao ahy. Diovy hysopa aho ho afa-pahotana, dia hadio; sasao aho, dia ho fotsy mangatsakatsaka [Heb: toy ny oram-panala]” Sal.51:4-7.
. Ny hevitra faharoan’ny atao hoe fibebahana dia ny fiverenana amin’Andriamanitra sy ny fihavanana Aminy indray. Izany dia mampahatsiaro antsika ny tantaran’ilay zanaka adala, izay rehefa avy nandany ny fananany tamin’ny sitrapo adala, dia tonga tana-polo ary nanjary naniry ny voan-kazo fihinan’ny kisoa, dia nihiaka koa nanao hoe : « Hiainga aho, dia hody any amin’ny raiko ka hanao aminy hoe: Raiko ô, efa nanota tamin’ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka tsy miendrika hatao hoe zanakao intsony; fa ataovy tahaka ny anankiray amin’ny olona karamainao aho » Lio.15 :18-19.
2- Ny endrika faharoa isehoan’ny asan’ny Fanahy Masina dia ny fanovàna ny fon’ny olona, ny toerany, ny fisainany, ary miaraka amin’izany koa ny fomba fifandraisany amin’Andriamanitra. Izany dia midika ho fitiavana an’ Andriamanitra sy fanoloran-tena hanao n y asany ary fanoavana ny sitrapony, amin’ny fankahalana ny ota sy ny fomban’ny tontolon’ny haizina sy ny asa ratsiny (1 Jao.2:15).
Hoy ny fanambaran’ny tenin’Andriamanitra: “Dia hofafazako rano madio hianareo, ka hadio; ny mba ho afaka amin’ny fahalotoanareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no hanadiovako anareo. Ary homeko fo vaovao hianareo, ary fanahy vaovao no hataoko ao anatinareo, ary hesoriko amin’ny nofonareo ny fo vato, ka homeko fo nofo hianareo. Ary ny Fanahiko no hataoko ao anatinareo, ka hahatonga anareo handeha araka ny lalàko sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. Ary honina any amin’ny tany izay nomeko ny razanareo hianareo, ka ho oloko hianareo, ary Izaho ho Andriamanitrareo” Ezek.36:25-28. Ary toy izany koa: “Tao amin’i Kristy no nampianarana anareo, araka ny fahamarinana izay ao amin’i Jesosy, mba hialanareo ny toetrareo taloha araka ny fitondran-tenanareo fahiny, izay mihasimba araka ny filan’ny fitaka, fa mba hohavaozina kosa hianareo amin’ny fanahin’ny sainareo, ary mba hotafinareo ny toetra vaovao, izay noforonina araka an’Andriamanitra amin’ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana” Ep.4:21d-24. “Fa maizina hianareo fahiny, fa efa mazava ao amin’ny Tompo kosa ankehitriny; mandehana tahaka ny zanaky ny mazava (fa ny vokatry ny mazava dia ao amin’ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana), mamantatra izay ankasitrahan’ny Tompo. Ary aza miray amin’ny asan’ny maizina tsy mahavoka-tsoa, fa aleo mananatra izany” Ef.5:8-11.
3- Ny endrika fahatelo isehoan’ny asa fanovana izay ataon’ny Tompo amin’ny alalan’ny Fanahy Masina, dia ny fampaherezana ny olon’Andriamanitra hijoro ho vavolombelona. Hoy Jesosy: “Fa hahazo hery hianareo amin’ny hilatsahan’ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran’i Jodia sy Samaria ary hatramin’ny faran’ny tany” Asa.1:8.
Ny hery omen’ny Tompo dia manome fahasahiana masina hijoro ho vavolombelon’ny finoana ny Filazantsara ho famonjena izay rehetra mino izany (Rom.1:16), dia vavolombelona hanambara ny fahamarinana sy ny fitiavan’Andriamanitra, ary hanome voninahitra Azy amin’ny fankalazana ny Anarany Masina. Fa ny maha-vavolombelon’ny finoana, raha zohina, dia asan’ny Fanahy Masina izay manafy ny olom-boafidin’Andriamanitra amin’ny hery avy any ambony, satria “tsy nomen’Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena” 2 Tim.1:7. Fa izany fahosana izany no nanjo ireo mpianatr’i Jesosy izay nandà Azy tamin’ny fotoana nitsarana Azy, eny, na dia nianiana aza izy rehetra fa tsy hivadika Aminy, dia araka ny fanambaran’ny Filazantsara manao hoe: “ Fa Petera namaly ka nanao taminy hoe: Na dia ho tafintohina noho ny aminao aza ny olona rehetra, izaho tsy mba ho tafintohina mandrakizay. Hoy Jesosy taminy: Lazaiko aminao marina tokoa fa anio alina, raha tsy mbola misy akoho maneno, dia handà Ahy intelo hianao. Hoy Petera taminy: Na dia hiara-maty aminao aza aho, tsy mba handà Anao tokoa aho. Ary toy izany koa no nolazain’ny mpianatra rehetra” Mat.26:33-35. Koa dia noho ny fahalemeny indrindra no nahatonga ny Tompo nandrara azy tsy hiala an’i Jerosalema, fa hiandry ny fahatanterahan’ny teny fikasana izay nomen’ny Ray ny amin’ny fiavian’ny Fanahy Masina araka ny voalaza ao amin’ny Lio.24:43 sy Jn.14:16. Fa ny maha-vavolombelona dia vokatry ny asan’ny Fanahy Masin’Andriamanitra, dia araka ny voasoratra hoe: “Tsy amin-kery na amim-pahatanjahana, fa amin’ny Fanahiko, hoy Jehovah, Tompon’ny maro” Zak.4:6.
/ Raha fehezina, ny fahatongavan’ny Fanahy Masina amintsika dia ny fanatanterahan’ny Tompo ny teny fikasany manao hoe: “Indro, havaoziko ny zavatra rehetra” Apok.21:5a. Izany dia asan’Andriamanitra manome fiainam-baovao ho antsika, ho an’ny ankohonantsika, ho an’ny fiangonantsika, ho an’ny firenentsika, mba hanafaka antsika amin’ny zioga amam-patoran’ny ota sy ny fitaky ny devoly, amin’ny fahazarana manimba sy ny asa maty rehetra, dia ny asan’ny nofo. Izany dia amin’ny alalan’ny fanatrehan’ny Tompo izay mamelombelona antsika ka miteny manao hoe: “Ny Fanahin’i Jehovah no ato amiko, Satria nanosotra Ahy hitory teny soa mahafaly amin’ny malahelo Izy; Naniraka Ahy hitory fandefasana amin’ny mpifatotra Izy, Sy fampahiratana amin’ny jamba, Hanafaka izay nampahorina, Hitory ny taona ankasitrahan’i Jehovah (Isa.61:1,2)” Lio.4:18-19.
Hoy Jesosy: “Izay mino Ahy, dia hisy onin’ny rano velona miboiboika avy ao an-kibony, araka ny voalazan’ny Soratra Masina. Ary ny Fanahy, Izay efa horaisin’ny mino Azy, no nolazainy tamin’izany” Jao.7:38-39a.
Baiko no omeny antsika: “Raiso ny Fanahy Masina” Jao.20:22. Anjara tsy esorina amin’ny mino izany.
Ho voninahitr’Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina izay ankalazaina anio ary ho mandrakizay. Amena.
Hi Fi – GESC Mada.